Madaxweyne Dani oo DF u soo jeediyey talo ku aadan dhismaha Galmudug – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay joojiso fara-gelinta qaawan oo uu sheegay inay ku hayso dhismaha maamulka cusub ee Galmudug.
Saciid Cabdullaahi Dani oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC-da ayaa sheegay in reer Galmudug ay dhameysan karaan arrimahooda gaarka ah, iyaguna ay hada dalbanayaan in dowladdu fara-gelinta ka deyso.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka war wareegay su’aal ahayd inay iska warqabaan Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo khilaaf uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka.
“Sida aanaan anaguba u jecleyn in aan faraha lala-gelin arrimaheena hoose ayay Puntland iyaduna u ixtiraamaysaa maamul walba arrimhiisa gudaha ah.” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Dani.
Tallaabada uu Xaaf horaantii bishan uga soo horjeestay dhabaha loo marayo dhismaha Galmudug ayaa xoojisay khilaafka raggaadiyay doorashada maamulka cusub ee Galmudug.
Doorashada lagu wado inay ka qabsoomto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf marba weji yeelanaya, mana cadda marka uu soo afjarmi doono.